Benitez: Chelsea hiilo ayey uga baahan tahay Shakhtar Donetsk. - Caasimada Online
Home Warar Benitez: Chelsea hiilo ayey uga baahan tahay Shakhtar Donetsk.
Benitez: Chelsea hiilo ayey uga baahan tahay Shakhtar Donetsk.
Tababaraha kooxda Chelsea Rafael Benitez ayaa u sheegay kooxda Shakhtar Donetsk inay kordhiso tayadeeda kulanka ay Arbacada Champions League ku wajahayan Juventus, waana kulankii Blues usoo bixin lahaa Koobka Kooxaha Yurub ama ka reebi lahaa tartanka.
Kooxda ka dhisan Galbeedka London ayey qasab ku tahay inay garaacdo Nordsjaelland ayna kooxda heysata Horyaalka Talyaaniga u rajeyso inay guul darro kasoo gaarto Ukraine si ay ugu soo baxaan wareega 16ka Uefa Champions League.
Laakiin, inkastoo kooxda Mircea Lucescu ay horaan jaratay Tikidhkeeda wareega 16ka, Benitez ayaa dareensan inay Shakhtar weli u baahan tahay inay kor u qaado kulankeeda ugu dambeeye ee Group-ka.
Wuxuu u sheegay Sky Sports: “Waan ognahay inay bareejo tahay wax aan noo fiicneyn laakiin wax fiican ayaa ah inay Shakhtar heysato ciyaartooy badan oo aad u fiican qof walbana wuxuu ka hadlayaa iyaga, sidaas darteed inta kale ee hartay waa inay tusaan inay yihiin ciyaartooy fiican.
”Markii aad ogtahay in kooxaha ugu sareeya Yurub ama caalamka ay ku daawanayaan ka dib waa inaad soo bandhigtaa. Sida cad Juve guul ayey halkaas u aadi doontaa laakiin Shakhtar waxay u baahan doontaa inay tusto heerka ay yihiin.
“Inaad ku dhameysato kaalinta labaad aadna la ciyaarto kooxda ka mid ah kooxaha ugu waa weyn Yurub way adkaan doontaa, sidaas darteed waxaan u maleynayaa inay isku dayi doonaan inay guul gaaraan.”
Hadii ay Chelsea ku harto wareega Group-ka waxay noqoneysaa kooxdii ugu horeysay ee iyadoo koobkan difaacaneysa ku harta marxaladan.